२७ वाणिज्य बैंकमध्ये निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा नेपाल बैंक पहिलो, सिडि रेसियो पनि सिमा भित्र | Sunaulo Nepal
काठमाडौं । निक्षेप संकलन र कर्जा प्रवाहमा नेपाल बैंक पहिलो पहिलो स्थानमा रहेको छ । नेपाल बैंकर्स संघले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार नेपाल बैंकले निक्षेप संकलन तथा कर्जा विस्तार वृद्धि गरेको छ ।
गत बैशाख महिनामा नेपालका २७ वटा वाणिज्य बैंकहरुमध्ये निक्षेप संकलन तथा कर्जा प्रवाह वृद्धिको आधारमा नेपाल बैंक प्रथम स्थानमा रहेको हो ।
गत बैशाख महिनासम्ममा नेपाल बैंकको निक्षेप २४.३५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने कर्जा विस्तार ३१.९८ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ । २७ वाणिज्य बैंकहरुमध्य १९ वटा बाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप बढेको छ भने ८ वटा वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपमा घटेको देखिन्छ । वाणिज्य बैंकहरुको औसत निक्षेप वृद्धि ६.२३ प्रतिशत रहेको छ ।
त्यसैगरि २७ वटै बाणिज्य बैंकहरुको कर्जा विस्तारमा वृद्धि भएको छ । औसतमा वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा विस्तारमा १७.४३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । बैशाख मसान्तसम्मा बाणिज्य बैंकहरुसंग कुल निक्षेप ४३ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयां छ भने कुल कर्जा प्रवाह ४१ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
नेपाल बैंकर्स संघले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार यस अवधिमा १८ वटा वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडि रेसियो) नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सिमा ९० प्रतिशत भन्दा बढि रहेको पाइएको छ ।
नेपाल बैंकको कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडि रेसियो) भने राष्ट्र बैंकले तोकेको सिमाभित्र नै रहेको छ । बैंकको सिडि रेसियो ८९.६५ प्रतिशत रहेको छ । औसतमा वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात ९०.८८ प्रतिशत छ ।
बढ्यो सुनको मूल्य, यतिमा हुदैछ कारोबार ?
सार्वजनिक सवारीको भाडा घट्यो, कुन रूटमा कति ? (सूचिसहित)